Ny Flip Digital Remedy dia mahomby amin'ny fividianana, fitantanana, fanatsarana ary fandrefesana ny dokambarotra mihoatra ny ambaratonga (OTT) | Martech Zone
Ny Flip Digital Remedy dia mahatonga ny fividianana, fitantanana, fanatsarana ary fandrefesana ny dokambarotra mihoatra ny avo lenta (OTT)
Alarobia 25, 2021 Alarobia 25, 2021 David Zapletal
Ny fipoahana ny safidin'ny media, ny atiny ary ny fizahan-tsary tamin'ny taona lasa dia nahomby Over-Ny-Top (OTT) doka tsy azo odian-tsy hita ny marika sy ny maso ivoho misolo tena azy ireo.
Inona ny OTT?
OTT dia manondro serivisy fampitam-baovao mivantana izay manome atiny fampielezana nentim-paharazana amin'ny fotoana tena izy na amin'ny fangatahana amin'ny Internet. Ny fepetra ny-ny-tampon'ny dia midika fa ny mpamatsy atiny iray dia mizaha ny tampon'ny serivisy mahazatra amin'ny Internet toy ny fizahana Internet, mailaka, sns.
Ny fanapahana tadim-poitra izay nanomboka tamin-kafanam-po alohan'ny nirongatra be ny valanaretina tamin'ny tombana Tokantrano 6.6 tapitrisa manapaka ny tadiny tamin'ny taon-dasa, nahatonga ny iray ampahefatry ny tokantrano amerikana tsy misy tariby. hafa 27% no andrasana hanao izany in 2021.
Miaraka amin'ny streaming ankehitriny kaonty efa ho 70% amin'ny fijerena fahitalavitra, ity mpihaino marobe ity dia misarika ny saina betsaka amin'ireo mpanao dokambarotra. Ny fandaniana amin'ny doka OTT dia antenaina hitsambikina avy amin'ny $ 990 tapitrisa tamin'ny 2020 ka hatramin'ny $ 2.37 miliara tamin'ny 2025, mandady tsimoramora mankany amin'ny fisongonana ny toerana ambony indrindra amin'ny fahitalavitra linear amin'ny fandaniana.
Na eo aza ny fahafaha-manao lehibe, ny fanatanterahana ny doka OTT dia mety ho fanamby ho an'ny marika lehibe sy ho an'ny maso kely. Noho ny sehatra maro dia maro, dia sarotra ny mahafantatra hoe iza no hofidiana. Ny fitantanana fifandraisana amin'ny mpanonta maro dia manahirana ary mety ho sarotra ny manara-maso ny refy mety hahalalana izay mandeha sy izay tsy mandeha.
Mba hamahana izany fanamby izany, Flip, ny sehatra OTT fampisehoana avy amin'ny Digital Remedy, dia manome fomba marani-tsaina kokoa hividianana, hitantanana ary hanamafisana ny fanentanana OTT. Saingy mihoatra ny taham-pahavitana video fotsiny, ity sehatra nahazo loka Digiday ity dia manome marika amin'ny antsipiriany momba ny famoronana, geografia, mpanonta, tolakandro ary maro hafa. Izy io dia manome ny lozisialy fitenenana, ny fanandratana ny marika, ary ny famakafakana fanakarana miampy mba hampahafantaran'ny mpanao dokambarotra fa tsy ny fampielezan-kevitra fotsiny no mitondra vokatra (sy ny fomba), fa mametraka ireo fomba fijery ireo hiasa eo noho eo, manatsara ny fampielezan-kevitra amin'ny tena izy mankany amin'ireo miovaova be. Ny vahaolana amin'ny serivisy feno dia mitantana ny androm-piainan'ny dokambarotra OTT iray manontolo, ahafahan'ny marika sy maso ivoho isan-karazany manararaotra amin'ny fahafaha-manao OTT amin'ny fomba tsotra.
Loharano mivantana avy amin'ny Inventory Premium
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny indostria, ny marika sy ny maso ivoho dia mahazo fidirana mivantana amin'ny mpanonta OTT premium rehetra mba hampitomboana ny fahafahan'ny mpihaino. Ny sehatra Flip dia mitrandraka angon-drakitra manankarena kokoa handrehitra ny fanatsarana ny fotoana tena izy, hiantohana ny fampielezan-kevitra manatanteraka ny fahafaha-mitrandrahana feno ary manome fomba fijery lalina sy manao izay mahasoa ny tetibola ataon'ny mpanao doka. Satria tsy misy olona afovoany dia mahazo ny vidiny mahomby indrindra ny marika, mamorona ROI avo kokoa ary miverina amin'ny fandaniana doka (ROAS). Ary satria ny tetikady OTT iray manontolo dia tantanana ao anatin'ny Flip, tsy ilaina ny manahirana amin'ny fifandraisana mpivarotra na fifanarahana. Tsotra izy io, atambatra ary mahomby.
Mametraha fepetra, fa tsy ny fahitana fotsiny
Raha mitohy matotra ny refy OTT, ny marika dia te hijery mihoatra ny taham-pahavitan'ny horonantsary (yes / no binary), tsindry ary fahatsapana. Amin'ny faran'ny andro, ny mpanao dokam-barotra dia te hahafantatra ny fomba fampiasan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo ny vokatra azo refesina, ary amin'ny farany, ny varotra. Flip dia afaka mampifandray ireo teboka ireo, handrefesana ireo KPI toy ny fisintoman'ny fampiharana, fitsidihana tranonkala, natomboka ny sarety fiantsenana, ary na dia ny fitsidihana ao amin'ny magazay aza. Mampifamatotra ny fomba fijerin'ny tena valin'ny dokam-barotra ny sehatra, mba hahitanao izay mandeha sy izay tsy mandeha.
Ity dia iray amin'ireo fiasa manasongadina izay mahatonga ny vahaolana ho tena miavaka - azontsika atao ny mamehy ny valiny amin'ny doka ary manao izany manerana ny fitaovana rehetra, mba hahitanao izay tena mampihetsika ny fanjaitra. Midika izany fa mahazo fomba fijery tena izy ianao ary azo ampiharina mba hanao fanitsiana misy dikany amin'ny fanentanana mba hahatratrarana ny tanjon'ny orinasa farany ambany.
Michael Seiman, tale jeneralin'ny fitsaboana nomerika
Data bebe kokoa ho an'ny fahitana lalindalina kokoa
Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia manana ny angon-drakitry ny mpanjifa voalohany ary izany no izy — tsy misy na inona na inona momba ny mpanjifan'ny mpifaninana aminao na koa ny mety ho mpanjifa. Miaraka amin'ny Flip, azonao atao ny mitondra ny angonao manokana ary manambatra azy amin'ireo loharanom-pahalalana ankolaka an'ny Digital Remedy ary manararaotra an'io angon-drakitra midadasika kokoa io ho an'ny fikendrena sy fanaovana tatitra mahomby kokoa. Midika izany fa azonao atao ny mampiasa ny angon-drakitra mpifaninana aminao mba hahazoana valiny tsara kokoa.
Vokatra fanandratana marika amin'ny fotoana tena izy
Ankoatra ny fijerena fotsiny sy ny fiovam-po ambany-ambany, ny Flip dia mamela ny mpivarotra hanaraka ny fisondrotan'ny marika ihany koa amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo metatra fandraisan'anjaran'ny OTT miaraka amin'ny fomba fijery mifototra amin'ny fandrefesana handrefesana ny fahatsiarovan-tena, ny fitadidy ary ny fahatsapana. Ka na dia ho an'ireo izay mbola tsy niova fo aza, Flip dia mamela anao haka poloney amin'ny fahamendrehan'ny marika hahitanao raha mihatra amin'ny mpihaino kendrenao ny doka anao.
Jereo hoe inona marina no mampihetsika ny fanjaitra
Amin'ny dokambarotra dizitaly, be dia be ny variables azo lazaina ho fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ny marina dia, ny mpihaino dia mety, ary azo inoana fa, hampiharihary amin'ny dokambarotrao amin'ny fantsom-baovao hafa miaraka mandritra ny fampielezana ny OTT. Tsy tsara ve ny mamantatra hoe inona amin'ireo ampahan'ny fampielezan-kevitrao no tena mitondra valiny? Miaraka amin'ny Flip, ny marika dia afaka mamaly ny fanontaniana: isaky ny nandray andraikitra, firy amin'izy ireo no nanao izany noho ny fivoahan'ny OTT manokana? Flip dia manome refy fampisondrotana lalina, fandrefesana sy famaritana hoe iza amin'ireo fiovan'ny fampielezankevitrao no misy fiatraikany lehibe amin'ny faran'ny farany anao eo amin'ny làlan'ny mpanjifa hividy. Manolotra ambaratonga granularity amin'ny alàlan'ny fanokanan-tena ny vokany ary ny fametrahana ny sandan'ny OTT ao anatin'ny fampielezanao ankapobeny. Amin'ny fampitahana ny tahan'ny fiovan'ny vondrona miseho sy mifehy amin'ny isa miovaova toa ny famoronana, ny mpanonta ary ny mpihaino, dia azonay atao ny mahita fa toa misy olona afaka hiova fo rehefa tratry ny doka ataonao amin'ny OTT na miorina amin'ny fiovan'ny fampielezan-kevitra sasany.
Fampianarana efa am-polony taona maro eo anilanao
Ny masinina dia mahira-tsaina ihany toy ny olombelona ao aoriany, ary ny ekipa ao amin'ny Digital Remedy dia niasa tamina horonantsary sy OTT hatrizay nahitanao na inona na inona. Nandritra ny 20 taona mahery tao amin'ny habakabaka niomerika, dia namoaka karazana haino aman-jery rehetra izy ireo, nanomboka tamin'ny fotoana mbola nanaovanao manatsara ny tanana. Ary miaraka amin'ny dimy taona eo ho eo ao amin'ny habakabaka OTT, ity fahalalana andrim-panjakana ity dia midika fa mahazo teknolojia mandeha amin'ny angona ianao izay tohanan'ny fahaiza-manao lalina avy amin'ireo matihanina izay efa tany an-dafy amin'ny maha mpivarotra azy ireo ary manana fahatakarana lalina momba ny metrika tena tadiavin'ny mpanao dokam-barotra. mahita. Ny workflow, ny visualization ary ny tatitra dia natsangana tamin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa mba hanomezana hevi-baovao ilainao hahalalanao tsara ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra.
Ny mitsambikina amin'ny haitao vaovao toa ny OTT dia mety ho toa manafintohina, indrindra amin'ny tsindry fanampiny amin'ny fahalalana fa tena tsy manan-tsafidy ianao - io no alehan'ny mpihaino anao sy ny mpifaninana aminao. Saingy amin'ny alàlan'ny fitaovana sy ny fahaizany mety eo an-joronao, na ny marika sy ny orinasa kely indrindra aza dia afaka mifaninana amin'ireo tovolahy ao amin'ity fantsona vaovao mafana ity. Miaraka amin'ny sehatra fampisehoana Flip OTT, Digital Remedy dia mahatonga azy io ho mora azo, tsotra ary mora vidy ho an'ny marika sy mpivarotra amin'ny ambaratonga rehetra handresy ao amin'ny OTT.
Manaova fandaharana Demo an'ny nomerika Flip
Tags: adtechfanafody nomerikaAtsimbadihoottmividy doka ottfitantanana doka ottdoka ottdokam-barotra ottott analyticsfitantanana fanentanana ottfanatsarana ny fanentananafampielezan-kevitra ottny-ny-tampon'ny
Zazavavaboary Fanafody nomerika 15 taona, Zapletal vao haingana no Lehiben'ny Innovation & Media Officer nandritra ny herintaona mahery taorian'ny nidirany voalohany tao amin'ny orinasa ho EVP an'ny Media Buying and Optimization. Tamin'ny andraikiny farany, ny fahaizan'i Zapletal sy ny fitaomany dia zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny famakiana tany Fitsaboana nomerika Vahaolana AdReady + sy Flip, tsy amin'ny fitarihana ireo ekipa miampita sy mizara ihany fa koa mitondra ny traikefany manokana amin'ny asan'ny media amin'ny latabatra, miaraka amin'ny fahatakarany lalina ny filan'ny mpanjifa sy ny teboka fanaintainany.
Nudgify: Ampitomboy ny fivadihan'ny fivarotanao miaraka amin'ity sehatra porofo ara-tsosialy miharo ity